13 Sọl gbara afọ [?] mgbe ọ malitere ịchị,+ ọ chịkwara Izrel afọ abụọ.
2 Sọl wee si n’etiti Izrel họpụtara onwe ya puku ndị ikom atọ; Sọl na puku ndị ikom abụọ wee nọrọ na Mikmash+ nakwa n’ógbè Betel nke bụ́ ugwu ugwu, Jọnatan+ na otu puku ndị ikom nọkwa na Gibia+ nke Benjamin, o wee gwa ndị fọdụrụ n’etiti ha ka ha laa, onye ọ bụla n’ụlọikwuu ya.
3 Jọnatan wee gbuo ndị agha Filistia+ na-eche nche+ na Giba,+ ndị Filistia wee nụ ya. Ma Sọl mere ka a fụọ opi+ n’ala ahụ dum, sị: “Ndị Hibru, nụrụnụ!”
4 Izrel dum nụkwara ka a na-asị: “Sọl egbuwo ndị agha Filistia na-eche nche, ugbu a Izrel esiwela ísì ọjọọ+ n’etiti ndị Filistia.” E wee kpọkọta ndị Izrel ka ha soro Sọl gaa Gilgal.+
5 Ma ndị Filistia zukọtara ibuso Izrel agha, ya bụ, ụgbọ ịnyịnya+ agha ndị dị iri atọ na puku mmadụ isii ndị na-agba ịnyịnya nakwa ndị dị ọtụtụ dị ka ájá dị n’ụsọ oké osimiri;+ ha wee gbagoo malite ịma ụlọikwuu na Mikmash n’ebe ọwụwa anyanwụ Bet-even.+
6 Ndị Izrel wee hụ na ha nọ n’oké ihe isi ike,+ n’ihi na ihe taara ha akpụ; ha wee na-ezo onwe ha n’ọgba+ nakwa n’oghere dị na nkume nakwa na nkume ndị dị elu nakwa n’oghere ndị dị n’okpuru ala nakwa n’olulu mmiri.
7 Ndị Hibru gafere Jọdan+ gaa n’ala Gad+ na Gilied. Ma Sọl ka nọ na Gilgal, ndị Izrel niile wee mara jijiji na-eso ya.+
8 O wee chere ruo ụbọchị asaa n’oge a kara aka nke Samuel kwuru;+ ma Samuel abịaghị Gilgal, ndị Izrel wee hapụ ya na-agbasasị.
9 N’ikpeazụ, Sọl sịrị: “Wetaranụ m àjà nsure ọkụ na àjà udo.” O wee malite ịchụ àjà nsure ọkụ ahụ.+
10 O wee ruo na ozugbo ọ chụsịrị àjà nsure ọkụ ahụ, lee Samuel ka ọ na-abata. Sọl wee gaa izute ya na ịgọzi ya.+
11 Samuel wee sị: “Gịnị ka i mere?”+ Sọl wee sị: “Ahụrụ m na ndị Izrel ahapụwo m gbasasịa,+ ma gị onwe gị abịaghị n’ụbọchị ndị a kara aka,+ ndị Filistia nọkwa na-ezukọta na Mikmash,+
12 m wee sị,+ ‘Ndị Filistia ga-agbadata ibuso m agha na Gilgal, emebeghịkwa m ka obi Jehova jụrụ.’ N’ihi ya, m manyere onwe m+ wee chụọ àjà nsure ọkụ ahụ.”
13 Samuel wee sị Sọl: “I zuzuru nzuzu.+ I debeghị ihe Jehova bụ́ Chineke gị nyere gị n’iwu,+ nke ọ gwara gị mee,+ n’ihi na, ọ bụrụ na i debere ya, Jehova gaara eme ka alaeze gị n’Izrel guzosie ike ruo mgbe a na-akaghị aka.
14 Ugbu a, alaeze gị agaghị adịte aka.+ Jehova ga-achọtara onwe ya nwoke obi ya nabatara;+ Jehova ga-ahọpụtakwa ya ịbụ onye ndú+ nke ndị ya, n’ihi na i debeghị ihe Jehova nyere gị n’iwu.”+
15 Samuel wee si na Gilgal bilie gawa Gibia nke Benjamin, Sọl wee malite ịgụ ndị Izrel ọnụ, bụ́ ndị ka so ya, ihe dị ka narị ndị ikom isii.+
16 Sọl na Jọnatan nwa ya, ha na ndị ka so ha, bi na Giba+ nke Benjamin. Ma ndị Filistia mara ụlọikwuu na Mikmash.+
17 Ìgwè ndị agha ndị na-akwakọrọ ihe na-esi n’ebe ndị Filistia mara ụlọikwuu amapụta n’ìgwè atọ atọ.+ Otu ìgwè na-aga n’okporo ụzọ nke gara Ọfra,+ ruo n’ala Shual,
18 ìgwè nke ọzọ na-aga n’okporo ụzọ gara Bet-horọn,+ ìgwè nke atọ na-aga n’okporo ụzọ gara n’ókèala chere ihu na ndagwurugwu Zeboyim, n’ebe ala ịkpa.
19 E nweghị onye na-akpụ ụ́zụ́ n’ala Izrel dum, n’ihi na ndị Filistia sịrị: “Ka ndị Hibru ghara ịkpụ mma agha ma ọ bụ ube.”+
20 Ndị Izrel niile na-agakwuru ndị Filistia, onye nke ọ bụla ịga mụọ+ mma ogè ya ma ọ bụ ọ́gụ̀ ya ma ọ bụ anyụike ya ma ọ bụ mma owuwe ihe ubi ya.
21 Ihe a na-akwụ iji mụọ ihe ndị ahụ bụ otu mkpụrụ ego pim maka mma ogè nakwa maka ọ́gụ̀ nakwa maka ndụdụ nwere ezé atọ nakwa maka anyụike nakwa maka ịkpọnye ndụdụ e ji achị ehi.+
22 O wee ruo na n’ụbọchị agha, ọ dịghị onye ọ bụla n’ime ndị niile ha na Sọl na Jọnatan nọ ji mma agha+ ma ọ bụ ube; ma, ọ bụ naanị Sọl+ na Jọnatan nwa ya ji ngwá agha.
23 Ndị agha ndị Filistia ndị na-eche nche+ na-amapụtakwa gaa n’ụzọ ndagwurugwu Mikmash.+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D9%26Chapter%3D13%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl